सुझावहरू र ब्याकप्याकिंगका लागि कारणहरू यात्रा समाचार
धेरै मानिसहरु को विचार को लागी आकर्षित छन् संसारलाई पछाडि पार्दै। यो एक ठूलो साहसिक कार्य हो, जसमा हामी आफ्नो विशेषज्ञतालाई सबै प्रकारका परिस्थितिहरूबाट बाहिर जान प्रयोग गर्दछौं। यो आफैंलाई र विश्‍वलाई चिन्ने एउटा तरिका पनि हो, कुनै क्षति बिना नै क्षितिज विस्तार गर्ने र नयाँ संस्कृतिमा हाम्रो दिमाग खोल्ने उत्तम तरिका।
हामी तपाईंलाई केहि दिन जाँदैछौं ब्याकप्याकिंगका लागि कारणहरू, तर रमाईलो सल्लाह पनि सबै भन्दा राम्रो अनुभव बनाउन र सबै राम्रो परिणाम हो। निस्सन्देह, यो आफैलाई सहजताबाट टाढा हुन आवश्यक छ, तर हामीले योजना बनाएका चीजहरू पनि लिनै पर्छ, किनकि यो केही सुरक्षित छ।
1 किन ब्याकप्याकिंग
2 एक्लै वा सँगसँगै?
3 तपाईंको ब्याकप्याक तयार गर्नुहोस्
4 सस्तो यात्राको लागि हेर्नुहोस्
5 अनुप्रयोगको फाइदा लिनुहोस्
6 सानो कुनाहरू पत्ता लगाउनुहोस्
7 सम्झनाहरु अमर गर्न एक पत्रिका बनाउनुहोस्
त्यहाँ धेरै कारणहरू छन् जुन हामीलाई ब्याकप्याकि to्गमा लैजान सक्छ। सब भन्दा महत्त्वपूर्ण मध्ये एक यो प्रकारको अनुभव हो हाम्रो क्षितिजको विस्तार गर्नुहोस् र तिनीहरूले हामीलाई सबै किसिमका परिस्थितिहरूमा राम्रोसँग सामना गर्ने बनाउँदछन्। धेरै फरक भाषाहरू र चलनहरूको साथ हामी जान्दैनौं भन्ने देशहरू र क्षेत्रहरूमा यात्रा गर्दा हामी सबै किसिमका परिस्थितिमा अनुकूल हुन सिक्नको लागि आफूलाई आरामदायी क्षेत्र छोड्न बाध्य गर्दछौं। यसले हामीलाई सबै प्रकारका परिस्थितिहरूमा अधिक बहुमुखी बनाउँछ।
अर्को कारण यसको महत्त्व हुन सक्छ यात्रा र गन्तव्यहरूको आनन्द लिनुहोस् सामान्य भन्दा फरक तरीकाले। सामूहिक पर्यटनबाट टाढा रहनुहोस् र आफुलाई शान्त र अधिक व्यक्तिगत तरीकाले टाढा लैजानुहोस्, जहाँ हामी आवश्यक चीजहरू बोक्छौं र प्रत्येक ठाउँको आनन्द लिन्छौं।
एक्लै वा सँगसँगै?
जब यो ब्याकप्याकिंगमा आउँदछ, धेरै व्यक्तिले धेरै कारणहरूले गर्दा एक्लो गर्न छनौट गर्दछन्। सबैजनाले लामो छुट्टी लिन सक्दैनन्, र किनभने कसैसँग यात्राको प्रबन्ध गर्न गाह्रो छ किनकि तपाईंले यस्तै प्रकारले कसरी यात्रा गर्ने भनेर बुझ्नुपर्दछ। सबैलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ब्याकप्याकिंग मनपर्दैन। एक्लै जानुले पनि हामीले बुझ्नु पर्छ मानिससँग बढी सम्बन्धित छ जुन हामी मार्गमा भेट्छौं, यो अनुभवको लागि सकारात्मक कुरा हो, तर यसको नाकाको रूपमा हामी सुरक्षित महसुस गर्दैनौं र हामी कहाँ छौं भन्नेमा निर्भर रहन सावधान हुनुपर्छ।
तपाईंको ब्याकप्याक तयार गर्नुहोस्
ब्याकप्याक तयार गर्दा, हामीले तपाईलाई दिनु पर्ने एक मात्र सल्लाह हो आधारभूत र अरू केहि ल्याउँनुहोस्। शौचालय, यदि सम्भव छ भने ती विभिन्न चीजहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ, सनस्क्रीन र सानो आपतकालीन किट। अत्यावश्यक लुगा, हामी रोक्न सक्ने ठाउँमा जहाँ तपाईं लुगा धुनु सक्नुहुन्छ। जब यो ब्याकप्याकको साथ जान्छ, यसले धेरै तौल गर्नु हुँदैन, र तपाईंले बुझ्नुपर्दछ कि हामी यसलाई लामो समयसम्म बोक्छौं, त्यसैले हामीले केवल आधारभूत कुराहरू बोक्नुपर्दछ, अरू सबै बाटोमा छोडिनेछ।
सस्तो यात्राको लागि हेर्नुहोस्
एक backpacker लक्जरी मा यात्रा कहिल्यै। त्यो हो, यो बारेमा छ एक सरल तरीकाले संसार हेर्नुहोस्, साना चीजहरूको मजा लिदै र अधिक खर्च बिना। आज हामीले उडान वा द्रुत र दक्ष यातायात छोड्नु पर्दैन, तर अनुप्रयोगमार्फत हामी सँधै सस्तो यात्राहरू पाउन सक्छौं। उडानहरू तुलना गर्न र सस्तोमा फेला पार्न त्यहाँ अनुप्रयोगहरू छन्, तर हामीसँग फोरमहरू पनि छन् जहाँ मानिसहरूले आफ्नो अनुभव साझेदारी गर्छन् के खर्च गर्ने र केमा खर्च नगर्ने भन्ने बारे। हामीलाई जानकारी दिँदै ब्यापप्याकरको रूपमा यात्रा गर्दा धेरै गल्तीहरू रोक्नको लागि कुञ्जी हो। राम्रो कुरा यो हो कि हामी आज जहाँसुकैबाट पनि हाम्रो मोबाइलको साथ इन्टरनेट पहुँच गर्न सक्दछौं।
अनुप्रयोगको फाइदा लिनुहोस्
हाल सबै चीजको लागी एक अनुप्रयोग छ। यस प्रयोजनको लागि उपयोगी अनुप्रयोगहरू भेट्टायौं भने हामी यात्राको यात्रा सुरु गर्दा हामी सहयोगको अभाव हुनेछैन। एप्लिकेसनहरूबाट कुनै पनि पोस्टरलाई भाषामा अनुवाद गर्नुहोस् जुन हामी बुझ्दैनौं तिनीहरूलाई जुन हाम्रो लागि सस्तो आवासको खोजी गर्दछ, वा जसमा हामी अन्य व्यक्तिको टिप्पणीहरू सबै प्रकारका स्थानहरू हेर्न सक्दछौं कि हेर्नका लागि यो राम्रो स्थान हो। नयाँ टेक्नोलोजी प्रयोग गर्नुहोस् किनकि ती तपाईंको जीवन सजिलो बनाउन सक्दछन्।
सानो कुनाहरू पत्ता लगाउनुहोस्
एउटा चीज जुन धेरै व्यक्तिले चाहान्छन् जब यो ब्याकप्याकिंगमा आउँदछ सानो कुनाहरू पत्ता लगाउनुहोस्। जब हामी कुनै स्थानमा हिंड्छौं जहाँ हामी सँधै गाडीमा आएका हुन्छौं, हामी सबैलाई फरक तरिकाले देख्छौं, किनकि यस्तै हुन्छ जब हामी हवाईजहाजमा चढ्नुको सट्टा पर्यटक गन्तव्यमा जानको लागि अलि अलि गर्दै यात्रा गर्छौं। हामी धेरै ठाउँहरू पत्ता लगाउँदछौं जुन यसको लायक हुन्छ, र हामीसँग अनौंठो अनुभवहरू हुनेछन्। तपाईंले यात्रा र गन्तव्य दुबै आनन्द लिनुपर्दछ।
सम्झनाहरु अमर गर्न एक पत्रिका बनाउनुहोस्
हामीले अनुभव गरेका सबै कुरा बिर्सन सक्छौं, त्यसैले राम्रो विचार भनेको एउटा बनाउनु हो यात्रा नोटबुक को प्रकार वा डायरी जसमा हामी चरणहरू र अनुभवहरू सहित जान सक्दछौं, फोटो सहित। यो ती क्षणहरू सम्झनको लागि यो तरिका हो, जब हामी बिर्स्यौं कि ब्याकप्याकिंग कत्ति रमाईलो छ, त्यसैले हामी रोममा जान चाहन्छौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » सामान्य » सुझावहरू र ब्याकप्याकिंगका लागि कारणहरू
लन्डन एक जोडी को रूप मा